Times Of Nepali » कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको करोडौं भ्रष्टचारको नालेबेली छताछुल्ल हेर्नुहोस
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीकोे प्रदेश सरकारले करोडौं भष्ट्राचार गरेको खुलासा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष रारा राष्ट्रिय महोत्सवको नाममा करोडौं भष्ट्राचार भएको खुलेको हो । रारा भर्मण शिर्षकमा खर्च भएको ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ वेरुजु देखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै भष्ट्राचार गरेको खुलेको हो । उनले ७८ लाख १६ हजार रारा भर्मण भनेर खर्चको हिसाव किताव देखाएका छन तर त्यो कहाँ, कसका लागि र किन खर्च भयो भनेर स्पष्ट पारेका छैनन् ।
रारा भर्मण बर्षमा उनले भ्रमणनै गरेका भएपछि ७८ लाखको भ्रमण कहाँ गएर गरे । उनी साँच्चै रारा गएकै हुन भने सरकारले उनलाई ब्यहोर्ने खर्च भनेको उनीसहित ३ जनाको खर्च हो । एक उनी आफै अर्का एक जना उनको सुरक्षाका लागि खटाइएका पिएसओ र एक जना स्वकिय सचिव । तिन जना रारा पुग्न कति खर्च लाग्छ, त्यहाँको बसाई, खुवाई र हिडाईको खर्च कति आउँछ ? कर्णालीका जनतालाई राम्रोसंग थाहा छ।
अव कुरो आयो खानाको अनुमान गरौं ३ जनाले खाना खाँदा दिनमा १० हजारकै खान्छन । अझ यसमा प्रदेशकी महिला प्रमुखलाईसंगै लगे त्यसमा केही थप्न सकिएला । अन्य केही खर्च जोडौ ३ लाखै पुग्यो । अन्य भन्नाले कार्यक्रता भेटघाट जिल्ला भ्रमण आदी इत्यादी । ७८ लाख खर्च गर्नका लागि उनी बर्षमा २५ चोटी रारा गएको हुनुपर्छ । तर उनको भ्रमण रेकर्डमा २ चोटी भन्दा धेरै गएको देखिदैन । ७२ लाख कहाँ गयो यो जनताले खोज्न पर्छ की पर्दैन ?
प्रकाशित मिति २ असार २०७६, सोमबार १०:०८